Shiinaha Qalabka Taatikada Qalinka Tattoo oo tayo wanaagsan Iyadoo aan laheyn Aluminium Kiis TZ-008 Soo saar iyo Warshad | MOLONG
1) Mashiinka Qalinka Tattoo 1pcs
2) Awood Bixinta 1pcs
3) Beddelka Cagta 1pcs
4) LBB Cartridges Cirbadaha 40pcs (10pcs Midkiiba) 3rl, 5rl, 5m1,7m1
Isku soo uruurinta Qoriga
1. Nadiifi gacmahaaga. Qoryaha Tattoo-ka waxaa loo baahan yahay in si taxaddar leh loola dhaqmo. Ka taxaddar ka hor intaadan mashiinadan wax ka qaban. Ku dhaq gacmahaaga saabuun lidka ku ah bakteeriyada ama xiro galoofyada cinjirka ah.
2. Baro qoriga. Qaabku wuxuu isku hayaa dhammaan qaybaha. Markaa waxaad haysataa laba gariirad oo elektromagnetic ah oo bixiya awoodda mashiinka. Wareegyadu si dhakhso leh ayey u dhaqaajiyaan baarka armature, kaas oo ku xidhan irbad xanniban. Awoodda korontadu waxay ku xiran tahay xargaha elektromagnetic. Dhammaan qeybahan waa laga saari karaa ama la beddeli karaa markii loo baahdo.
3. Isku soo wada duub foostada. Kormeer qoriga xajintiisa. Waxaa jira laba dhinac oo xajin tuubada iyo qoriga caaraddiisa. Ku dhaji kuwan dhererka la doorbido, oo adkee labada boolal ee xajinta. Celcelis ahaan cirbaddu waa inaysan dhaafin caarada wax ka badan 2 mm oo aan ka yarayn 1 mm. Haddii uu jiro dhiig xad-dhaaf ah, markaa cirbaddaadu aad ayey u dheer tahay.
4. Irbadda dhig. Bal u fiirso cirbadaha lagaa siiyay xirmada. Waa inaad haysataa cabirro yar oo kala duwan oo ah cirbado. Ku rakib mid ka mid ah cirbadaha adoo gelinaya tuubbada dhinaca caarada. Ka taxaddar inaadan caajis ka dhigin irbad intaad is uruureyso.
5. Adkee ibta naaska. Ibta naaska, oo sidoo kale loo yaqaan grommet, ayaa irbadda xajisa oo ku dhegta salka qoriga. Dhig ibta naaska biinanka Ku dheji cirbadda cirbadda afkeeda ibta.
6. Irbadda ku hagaaji. Markaad xajisid xajinta, waxaad u baahan tahay inaad hagaajiso dhererka inta irbadda la soo saaray ay tahay. Waad hagaajin kartaa soo-gaadhista cirbadda adoo hagaajinaya qalabka tubbada. Qalabka tuubadu waa furitaanka la isku hagaajin karo ee u dhexeeya kilkisha iyo irbadda.
Hore: Mashiinka madow ee silikoon madow oo la tuuro oo leh talooyin hufan
Xiga: Nadiifi 108mm Talooyin Jeermis leh Qabasho Jooji Talooyin Tattoo Tattoo dheer oo la tuuri karo irbadaha Tattoo
Qalabka Tattoo-ka bilowga ah
Qalabka Mashiinka Tattoo Gariiradda
Qalabka Xididka Dhegaha La Tuuri Karo
Qalabka Qalabka Daloolinta
Xirmada Qalabka Tattoo Xirfadeed
Xirmooyinka Tattoo Xirfadeed
Qalabka Mashiinka Tattoo-ga Xirfadeed
Qalabka Tattoo Qalabka
Qalabka Tattoo Tattoo
Qalabka Xirfadaha Mashiinka Tattoo
Qalabka Mashiinka Tattoo
Qalabka Mashiinka Tattoo-ga ee wireless-ka ah
Shelf Is-taagan Koob Cup haysta
Hummingbird Tubooyinka Tattoo La tuuro 25MM